▷ Laptọọpụ ụmụ akwụkwọ kacha mma nke 2022: ntuziaka, onyinye na ndị ọzọ!
akwụkwọ ego. Ị chọrọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ. Ma eleghị anya, ị na-achọ ya nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, ịchọtala ntụnyere ị na-achọ. Anyị emeela ndepụta nke kọmputa kacha mma maka ụmụ akwụkwọ kọleji.
Ndị dị ọnụ ala mana n'otu oge ahụ ha na-arụ ọrụ nke ọma dị ka akwụkwọ ederede na Okwu, ihe ngosi, mpempe akwụkwọ dị ka Excel, na n'ezie ị nwere ike ịnyagharịa n'enweghị nsogbu. Kedu laptọọpụ ịzụta maka kọleji nwere ike ịghọ mgba na-adọrọ mmasị ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụdị na-apụta, ma dịka anyị na-ekwu, ị gaghị ahapụ isiokwu a.
Taa laptọọpụ maka kọleji bụ naanị a akụkụ dị mkpa maka nwa akwụkwọ ọ bụla, ọ bụghị nanị site na mahadum n'ọnọdụ ụfọdụ ọbụna site na ulo akwukwo. Nwanne m nwanyị dị afọ 17 gwara m na ha na-eji ha kwa ụbọchị na klas ịchọta ozi na ime ihe omume, n'agbanyeghị na ọ ga-adabere na etiti ahụ.
1 Laptọọpụ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ
1.2 Asus Vivo akwụkwọ
1.3 HP Stream (14 inch)
1.4 Apple Macbook Air (13,3 inch)
1.6 Egwuregwu Asus TUF (15,6 inch)
1.8 Acer Swift 5 (14-anụ ọhịa)
1.9 Asus Chromebook maka ụmụ akwụkwọ
1.10 Asus ZenBook 14-inch
2 Otu esi ahọrọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ
2.2 Onwe ya
2.4 Kaadị eserese
2.6 Usoro njikwa
2.7 Na ma ọ bụ na-enweghị DVD ma ọ bụ BluRay agụ?
3 Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma iji mụọ ...
3.2 IT na mmemme
3.4 Ọ bụrụ na ị ga-amụ na igwu egwu
3.7 Ihe eserese
4 Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ iji mụọ
5 Iji mụọ akwụkwọ, ọ ka mma desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ?
6 Nkwalite laptọọpụ ụmụ akwụkwọ
6.1 Apple na mac
7 Ngwa iji kọmpụta were ndetu
7.4 Wolfram Alfa
Laptọọpụ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ
Amaghị nke kọmputa ị ga-azụta? Chọpụta ihe bụ kacha mma laptọọpụ ụdị wee pụọ na obi abụọ.
N'ime nyocha ntụnyere a anyị etinyela Mac maka ụmụ akwụkwọ, kọmpụta ngwakọ, Chromebooks na ndị a ma ama. N'okpuru ebe a, anyị nyere ha iwu site na akara yana kwa otu.
N'oge a, anyị ga-akwado otu n'ime laptọọpụ ụmụ akwụkwọ nke ọtụtụ ndị na-amasị ekele maka nnukwu ihuenyo ya (inch 14). Mgbe e mesịrị, anyị ga-ekwu maka 13, ma site na ihe anyị hụrụ ma jụọ na laptọọpụ mahadum, nke a na-achọsi ike karị. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, ya na Lenovo Ideapad 3 ọ na-ewetara anyị ike ịtụnanya na ọnụahịa dị mma. Ọ na-mere nke nwa plastic na anya mara mma isi, ma ka na-emetụ ya na ijide ya na-enye a mmetụta nke siri ike nke masịrị m. N'ezie, ika abanyelarị nke ọma ụdị na-adịgide adịgide.
Na ihuenyo mkpebi 1920 × 1080 pikselụ echere m na ọ karịrị nke ukwuu inye ya ngwa kwa ụbọchị ma ọ bụ ikiri ihe nkiri na vidiyo na ịntanetị. Anyị ejirila ya na-enweghị nsogbu ịgụ na ide ma ọ bụ ịchọgharị ịntanetị. Banyere njirimara teknụzụ, ọ na-abịa na Intel Core i3 processor, 8GB nke RAM na ọzọ anyị nọ na nnukwu draịva 512GB mana SSD, yabụ arụmọrụ ya dị elu karịa.
Ọ bụ ezie na eserese UHD dị n'etiti etiti dị ala, anyị enwebeghị nsogbu na egwuregwu na ngwa ụfọdụ, naanị mgbe ha na-achọsi ike. Banyere ndụ batrị ị nwere ike ịtụ anya ihe dịka awa 5, nke na-erughị ụfọdụ, mana ka a na-akwanyere ùgwù n'ihe gbasara nnwere onwe na-eburu n'uche na ihuenyo bụ otu n'ime nnukwu.
El price bụ nnọọ ọnụ na ndepụta kọmputa maka ụmụ akwụkwọ kọleji, ihe na-emekwa ka ọ bụrụ igwe zuru oke maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịchekwa ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ike, ezigbo mma na ọnụ ala dị ala, ASUS VivoBook ọhụrụ bụ ihe ị na-eche.
Ọ nwere oke 14 inch LED ngosi Site na mkpebi nke 1920 × 1080 pikselụ, maka nke a ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ na ịmụ ihe nke ọma na-enweghị imebi anya gị, mana ị ga-enwekwa ike iji oge ntụrụndụ na oge ntụrụndụ dị mma na-eme nchọgharị na ịntanetị ma ọ bụ na-ekiri ihe nkiri kachasị amasị gị. na usoro nwere nnukwu ihe oyiyi na ụda olu.
ASUS VivoBook bụ laptọọpụ ezigbo maka ma ọrụ na ọmụmụ ihe. N'iji oke dị nro na ịdị arọ nke naanị 1,5 kilos, ị nwere ike ibuga ya nke ọma na akpa gị. Na mgbakwunye, ekele maka batrị ya na-emesapụ aka ị ga-enweta nnwere onwe zuru oke ma ọ bụ nọrọ ọkara.
Ọ na-abịa na Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ, yabụ ị nwere ike ịga n'ihu na-eji ngwa niile ị na-emebu na gburugburu ebe ama ama. N'ime, Intel Core i7-10510U processor na 4,90 GHz yana kaadị eserese Intel UHD na 16 ya. GB nke Ram Ha na-enye ya ike na arụmọrụ niile ịchọrọ ka ị nwee ike ịrụ ọrụ n'ime mmiri na ọtụtụ ngwa n'otu oge.
Ị gaghị enwe nsogbu ohere ọ bụla, ebe ọ bụ na ha 512GB SSD draịvụ ike ị nwere ike ichekwa ọtụtụ narị akwụkwọ, vidiyo, foto, egwu na ndị ọzọ.
Site na njedebe ojii chocolate mara mma, laptọọpụ a na-agụnye keyboard QWERTY dị mma, 802.11bgn WiFi Njikọta, Njikọ Bluetooth ka ị nwee ike ịnyefe faịlụ ma ọ bụ jikọọ ekweisi ma ọ bụ igwe okwu ikuku gị, ọdụ ụgbọ USB iji jikọọ ngwa dịka mbanye mpụga, pendrive, òké, na a Ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, dị mma maka ijikọ laptọọpụ gị na ihe nleba anya mpụga.
HP Stream (14 inch)
N'ụzọ ụfọdụ, mgbe ị na-achọ ịzụrụ laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ, anyị na-atụ anya njirimara ndị dị ala, agbanyeghị, ụlọ HP ejirila kwalite ya n'ụdị a dabara adaba. Ọ na-abịa na 4GB nke DDR4 SDRAM na Dual 3020e processor na-abịa site ntakịrị n'azụ mana anyị ahụla na ọ na-ewetara anyị mmepe na-enweghị stagnation nsogbu adịghị. N'ezie, buru n'uche na ọ gaghị ejide ma ọ bụrụ na ịmalitere egwuregwu ma ọ bụ mmemme na-enweghị ụda maka kọmputa dị elu. Ọ na-abịa naanị na 64GB nke ebe nchekwa, nke pụtara na ị ga-achọ draịvụ ike mpụga ma ọ bụ nchekwa igwe ojii n'agbanyeghị na ọ karịrị ikike zuru oke maka sistemụ arụmọrụ, ụlọ ọrụ na mmemme ndị ọzọ a na-ahụkarị maka ọrụ nkịtị.
Otu n'ime njirimara dọtara uche m bụ nke ahụ batrị na-adịru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 8. Bịa, ọ nọrọ m ụbọchị niile n'enweghị nsogbu mgbe m nwara ya. Echere m na ọ bụ ihe bụ isi na laptọọpụ ụmụ akwụkwọ ka o wee nwee ike iguzogide ojiji nke n'etiti klaasị na-enweghị ibu eriri mgbe niile.
La ihe ngosi doro anya ma na-egbuke egbuke, ma ọ na-ata ahụhụ ntakịrị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile ya anya site n'akụkụ ụfọdụ. Anyị nwere ike ikwu n'ozuzu na HP Stream 14-df008nf na-eweta ahụmịhe onye ọrụ mara mma nke na-eme. nke ọma obere maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọkachamara nke na-aga n'ihu mgbe niile, na-ahụ na anyị nwere ike imeli ya maka ha ọnụ ala.
Maka ndị na-achọ mac mmụta nke a bụ ihe kacha mma anyị chọtara maka njirimara ndị a. Na-ejikọta ike na obere ibu. Apple's Macbook Air nwere a Nhazi aluminom a ma ama nke ọma yana ịdị oke ọkụ ma dịkwa gịrịgịrị. Ọ bụ ezigbo enyi ị ga-eyi site n'elu ruo na ala site na klaasị ruo na klaasị. Ọ nwere 1,1GHz Intel Core i3 processor na 8GB nke RAM na ụdị kachasị mkpa na n'ezie ị gaghị achọ karịa.
Ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows dị ka sistemụ arụmọrụ, yana Microsoft Surface Pro 7 ị gaghị achọpụta ọdịiche ahụ, ewezuga ike na ọsọ dị egwu, ebe ọ nwere ụdị ahụ. Windows 10 desktọọpụ nke ahụ ga-enye gị ohere ịga n'ihu na-eji ngwa na ngwa ọkacha mmasị gị, mana n'ụzọ dị irè karị.
Surface Pro 7 bụ mbadamba ihe na ọ bụ kọmpụta nwa akwụkwọ laptop ike dị elu, nke e mere maka ọrụ yana maka ọmụmụ ihe na onye ọrụ ọ bụla. N'iji naanị gram 766 dị arọ na batrị nke na-enye ihe ruru awa 9 nke nnwere onwe, ị nwere ike iburu ya n'ebe ọ bụla na-enweghị nchegbu maka ịchọ plọg. Na ihuenyo PixelSense nke inch 12.3 ị nwere ike ịlele akwụkwọ gị, foto na vidiyo gị nwere ọkwa dị iche na ịdị nkọ naanị ka ọ bụ eziokwu.
Na ngalaba vidiyo na foto, o nwere 8 MP igwefoto isi Site na nke ị ga-enwe ike nweta foto na ịdekọ vidiyo dị oke mma, ebe igwefoto n'ihu 5 MP ị nwere ike n'ezie nnọkọ vidiyo na HD site na Skype ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ngwa dị ka òké, keyboard ma ọ bụ draịvụ ike, ị nwekwara njikọ USB 3.0, yana WiFi na Bluetooth connectivity.
Ezigbo ihe: Ọ dị ntakịrị ntakịrị, ọ dị mma nke ukwuu iyi yana ọ na-arụ ọrụ na Windows 10.
Ihe ọjọọ: The nnwere onwe nwere ike dịtụ ngosi dabere na mmemme anyị na-agba ọsọ na nke a ngwakọ nke laptọọpụ na mbadamba maka mahadum.
Ọ nwere ike isi ike ịchọta njirimara teknụzụ na laptọọpụ mahadum nke na-emezu atụmanya arụmọrụ ị na-achọ na ihe ndị ọzọ. na mmefu ego siri ike, nke Huaewi MateBook a na-ezute n'enweghị nsogbu. Ọ na-eji Core i7 processor nwere 16GB nke RAM. Ọ dị mma, ee? Ọ nwere ike dị ukwuu maka ojiji kwa ụbọchị na mgbakwunye na gụnyere 512GB nke draịvụ ike SSD iji chekwaa faịlụ, ma ọ bụ na ọ pụtara na ị chọghị iji ngwaọrụ nchekwa mpụga iji chekwaa data.
Mgbe ị na-anwale ihuenyo ahụ, anyị ahụla na ọ doro anya ma na-egbuke egbuke iji mee ka igodo dị ụtọ karị. Onwe m, ọ bụ ihe m ji kpọrọ ihe nke ukwuu ebe ọ bụ na ọtụtụ ihuenyo laptọọpụ maka ọmụmụ ihe na-adịkarị obere mkpebi, mana nke a abụghị ikpe na ụdị a. Kọmputa ụmụ akwụkwọ a gụnyere eserese Radeon Vega, nke n'ezie ahụla m na ọ bụghị nke kacha mma n'ụwa mana ọ karịrị nke ukwuu maka. na-egwu egwu mgbe ụfọdụ n'ihe gbasara ịgwụ ike na klas ụfọdụ, ma ọ bụ kwa iji Photoshop na-enweghị nsogbu.
Huawei MateBook bụ laptọọpụ kọleji zuru oke maka ụmụ akwụkwọ ahụ nọ na mmefu ego siri ike mana chọrọ ngwaike dị mma yana ihe ngosi 14-inch 1920 × 1080 pikselụ.
Egwuregwu Asus TUF (15,6 inch)
Ụdị laptọọpụ ụmụ akwụkwọ a na-abịa na Windows 10, ngwaike dị ike na mgbakwunye na oke ọnụ ahịa dị ọnụ ala na-akpali. N'ime ya, anyị na-ahụ AMD Ryzen 5 processor nwere 16GB nke RAM (ọ dịkwa na AMD Ryzen kwa), nke na-eme ya. zuru oke iji rụọ ọrụ ọ bụla n'ime oge ọrụ anyị. Ọ gụnyere ihuenyo 15,6 inch nwere mkpebi HD zuru oke na 1920 × 1080 pikselụ.
Ọ ga-enye gị ohere karịa ịrụ ọrụ, yana otu ihe ahụ na nke gị 512GB n'ime ebe nchekwa SSD siri ike, mana ọ na-enye gị ohere dị ukwuu iji chekwaa data. Ekele maka eserese ya, GeForce GTX 1650 ga-enye gị mmepe zuru oke maka egwuregwu na mmemme, na-eche na ị gaghị aga dezie ọtụtụ vidiyo dị ka pro. Tinye Asus a n'elu ihe ịzụrụ ihe kacha mkpa ma ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ dị ọnụ ala ma dị ike.
Ị na-elele laptọọpụ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ maka ọnụ ahịa dị mma. Site na ya, ị na-eji laptọọpụ kọleji mara mma. Ọ bụ ngwakọ n'etiti mbadamba na obere laptọọpụ. Ọ na-abịa na ihuenyo 4-inch 14,1K nke na-enye anyị nkọwa doro anya nke onyonyo na ederede yana nnukwu batrị nọrọ anyị ụbọchị niile, n'ọnọdụ gị ọ ga-adị mma ijide klas.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkwụsi ike na ịdị mfe nke iji, Windows 10 Sistemu ụlọ ga-eme gị nke ọma. Ọ na-abịa na 8GB DDR4 nke RAM na a Intel Gemini Lake processor. Anyị na-akwado ile ya anya nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka obere laptọọpụ mụọ ihe, nke emechakwara na aluminom
Ezigbo ihe: Slim na mma. Nnukwu nnwere onwe. Ngosipụta 4K pụtara ìhè. Ahụigodo dị ezigbo mma.
Ihe ọjọọ- Ike nwere oke mana ezuru maka ọrụ ndị bụ isi kwa ụbọchị.
Acer Swift 5 (14-anụ ọhịa)
Na-eso na kọmputa maka obere ụmụ akwụkwọ anyị na-ahụ Acer Swift a. Nwee a mara mma imewe mgbe ewepụghị na-enye a anya nke oge a. Ọ na-erughi 2kg dị ka ụmụnne ya ngwakọ nke mere na ọ dị obere ma e jiri ya tụnyere ndị a mana ị gaghị achọpụta ya itinye ya na akpa gị ma ọ bụ azu paaki iji gaa mahadum.
Ọ na-abịa na ọgbọ 5th Intel Core i11 processor na 1,7Ghz na 8GB nke RAM ma na-enye anyị ike karịa ngwakọ ndị ọzọ, ya mere o zuru ezu ịtụle ya dị ka ngwaọrụ nke ngwaike kachasị.
Ị ga-enwe ihe karịrị imeghe ma jiri ọrụ ndị bụ isi rụọ ọrụ na-enweghị nkwụsị. Naanị, dị ka ụdị ndị ọzọ anyị nwalere, atụla anya iji ọtụtụ ngwa, mmemme ma ọ bụ egwuregwu nwere ike kachasị na udo nke uche.
Ọ na-abịa na ihuenyo 1920 × 1080 pikselụ nwere panel IPS nke na-amasị anyị nke ukwuu maka ya. akụkụ nlele magburu onwe ya inwe ike ide akwụkwọ, dee ndetu na ọbụna lelee vidiyo na mkpebi dị oke mma. Agbanyeghị na enwere nhọrọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ siri ike karị, Acer Aspire Swift 5 bụ ngwakọ zuru oke na mpaghara etiti maka nwa akwụkwọ ọ bụla chọrọ iburu laptọọpụ ya ka ọ were ndetu na ndetu.
Asus Chromebook maka ụmụ akwụkwọ
Maka ndị na-ahọrọ Chrome OS mana chọrọ ihe ihuenyo buru ibu, ụdị Asus a nwere ike ịbụ nhọrọ gị zuru oke. Ọ na-abịa na 3350GHZ Intel Celeron N2,4 nwere 4GB nke RAM ka anyị nwee ike ikwu na ọ gaghị emeri agbụrụ ọ bụla, mana na-enye ngwaike zuru oke maka ojiji kwa ụbọchị na nkịtị. Ọ na-abịa na nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri njikọta gụnyere HDMI, kaadị SD, USB 2.0, USB 3.0, wdg.
Na laptọọpụ ụmụ akwụkwọ, Asus na-enye a siri ike mmetụta na imewe ọ bụ ezie na ọ nweghị ngwaike pụtara ìhè nke anyị nwere ike ịhụ. Nhọrọ ikpeazụ nke anyị chere na ị ga-enwe mmasị ịtụle dị ka ọ dị na mbụ, ọnụ ahịa dị ọnụ ala na ihe karịrị nke zuru oke maka ọrụ kwa ụbọchị.
Asus ZenBook 14-inch
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ kọmputa ụmụ akwụkwọ nwere ihuenyo inch 14 mana ịchọrọ ịnye ya ihe dị mkpa na ihuenyo mgbe ahụ Asus bụ ihe nlereanya ị na-achọ. Ọ nwere mkpebi nke 1920 × 1080, ihe bụ ụkọ maka ọnụahịa a. Ọ nwere Intel Core i7 processor nke bụ obere mkpuru na RAM adịghị mkpụmkpụ ma e jiri ya tụnyere o nwere 16GB, nke na-eme ka ọ dịtụ nwayọọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge.
Otu n'ime ihe ndị masịrị m mgbe m ji ya bụ ịhụ na ọ bịakwara na Windows 10 etinyere ya, yabụ na ị gaghị etinye ego na oge imelite ya mgbe ị bupuchara ya. Banyere njirimara egwuregwu, enweghị nsogbu na eserese Radeon ya nke na-arụ ọrụ nke ọma, yabụ atụla anya na ọ ga-abụ nke zuru oke na egwuregwu ọgbara ọhụrụ n'ihi na ọ ga-efu oke ya.
Asus zuru oke maka ụmụ akwụkwọ nwere ịkwadebe ihe ngosi na ọrụ ụlọ ọrụ kamakwa maka ọrụ ndị chọrọ ike karịa. Ị nwere kọmputa ruo afọ ole na ole nwere ihe nlereanya a.
Maka anyị, ndị a bụ laptọọpụ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ:
CHUWI Akwụkwọ HeroBook
Otu esi ahọrọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji laptọọpụ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ mahadum, anyị na-akwado ka ị gbasoo ndị a ndụmọdụ mgbe ịzụrụ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ itinye ego gị nke ọma.
Ọ bụrụ na ị ka na-ejighị n'aka nke ụdị ịzụta, họrọ na kacha mma price laptọọpụ
A na-ebelata ohere nke desks na tebụl nke mahadum na-emekarị ka ọ bụrụ Anyị na-akwado ka ị nzọ na ihe nlereanya nke 13 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ. Ọ bụ nha karịa nke ọma na laptọọpụ ga-adịkwa kọmpat karịa, ihe ga-abara gị uru ịkwaga ya site n'otu ebe gaa na nke ọzọ mgbe niile ebe ọ ga-abụ ihe na-erughị inch 15 ma ọ bụ karịa.
N'ezie, ọ bụrụ na ị ga-eji kọmputa mee ihe karịa ịmụ ihe (ntụrụndụ, egwuregwu, YouTube, wdg), ikekwe ị bara uru nke ọma. zụta laptọọpụ inch iri na ise ka ọ nụ ụtọ nha ihuenyo buru ibu iji rie ọdịnaya multimedia.
Ọtụtụ oge ị gaghị enwe plọg ọ bụla dị nso iji jikọọ chaja laptọọpụ ya mere a ga-atụ aro na ihe nlereanya ị zụrụ nwere ike. jide ọbụlagodi awa 6 eji ma ọ bụ karịa.
Dị ka ndụmọdụ, gbalịa gbanyụọ ihuenyo ma ọ bụ njikọ wifi N'oge ndị ahụ ị na-adịghị eji kọmputa. Site na aghụghọ a dị mfe ị ga-enwe ike ịgbatị ndụ batrị nke laptọọpụ nwa akwụkwọ gị nke ukwuu.
Ọ gwụla ma ị na-amụ ọrụ nke eji ngwa dị ike dị ka Adobe suite ma ọ bụ ngwaọrụ dịka AutoCAD, ị gaghị achọ oke ike na kọmputa. Ihe anyị na-akwado bụ na mgbe ị na-ahọrọ laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ, nzọ na ụdị na SSD draịvụ ike ebe ọ bụ na ị ga-ahụ a karịa bukwanu arụmọrụ abawanye.
Ọ bụ ezie na ọ ga-adabere na mmefu ego gị, anyị kwenyere na ezigbo laptọọpụ maka ọmụmụ ihe kwesịrị inwe ma ọ dịkarịa ala àgwà ndị a:
Nhazi: Intel Core i3 ma ọ bụ karịa
Ebe nchekwa RAM: 8GB ga-adị mma. Site na 4GB ị ga-aga nke ọma n'oge ụfọdụ.
NchekwaỌ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ịchekwa ihe nkiri ma ọ bụ egwu, m ga-akụ nzọ na ihe nwere 128 ma ọ bụ 256GB mana SSD iji nweta ọsọ mgbe ịmepe ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ ohere, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ihe nlereanya nwere opekata mpe 500GB mana HDD ka ọ ghara ime ya oke ọnụ.
Ọ gwụla ma ịchọrọ ịme egwuregwu ma ọ bụ jiri ngwa dị ike nke chọrọ iji kaadị eserese ahụ eme ihe, nke agbakwunyere na-abụkarị nke zuru oke n'ọtụtụ oge.
N'okpuru, ị nwere tebụl ntụnyere nke anyị chịkọtara ụdị eserese ị ga-achọ na laptọọpụ dabere na ọmụmụ gị:
Ọmụmụ Ike chọrọ Ihe Nlereanya GPU
Nkà na-emesapụ aka (akụkọ ihe mere eme, philology Hispanic, linguistics, wdg) Ọkọlọtọ Eserese agbakwunyere
engineering Elu: ọpụrụiche maka injinia NVIDIA GTX 2060 ma ọ bụ karịa
Ihe eserese Elu: pụrụ iche maka imewe NVIDIA GTX 3070 ma ọ bụ karịa
Nhazi Elu: pụrụ iche maka 3D NVIDIA GTX 2070 ma ọ bụ karịa
Eserese na mmemme egwuregwu vidiyo Elu: pụrụ iche maka imewe na mmemme ADM Radeon HD 570 ma ọ bụ karịa
Asụsụ mba ọzọ Ọkọlọtọ Eserese agbakwunyere
Sayensị ndụ ( bayoloji, wdg) Ọkọlọtọ Eserese agbakwunyere
Usoro mgbakọ na mwepụ Ọkọlọtọ Eserese agbakwunyere
Dị ka ị na-ahụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ na-ezuru ya na eserese agbakwunyere nke laptọọpụ n'onwe ya na-eweta na nke ahụ na-abụkarị Intel Iris ma ọ bụ Intel HD Graphics.
Dị ka ọ na-adịkarị, mmefu ego anyị na-enwe mgbe anyị na-amụ ihe dị obere (ọ bụ ezie na a na-ahụ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum na Mac na-adị mfe karịa ihe mgbochi euro 1.500), ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị nke dabara anyị mkpa nke ọma na akwụghị ụgwọ maka atụmatụ ndị ọzọ anyị na-agaghị eji.
Anyị maara na dị ka ezigbo nwa akwụkwọ apụl na-amasị gị ma ịchọrọ mac Ma kpachara anya, ọ bụghị mmemme niile a na-eji na ngalaba agụmakwụkwọ dabara na sistemụ arụmọrụ nke kọmpụta dị na ngọngọ, nke ga-amanye gị itinye Windows na Mac na n'ikpeazụ ị ga-akwụkwu ụgwọ maka kọmputa. nke ahụ gaara adị ọnụ ala karịa na nrụpụta ọ bụla ọzọ.
Ndụmọdụ anyị bụ na maka ọmụmụ ihe ị na-azụta laptọọpụ nwere Windows ebe ọ bụ sistemụ kacha eji eme ihe n'ụwa yana emepụtara ya ngwa ngwa niile. Nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi kwe nkwa na ị gaghị enwe nsogbu iji mmemme mmụta na ngwa ndị enyere gị n'ụlọ akwụkwọ, akwụkwọ, wdg.
Na ma ọ bụ na-enweghị DVD ma ọ bụ BluRay agụ?
Laptọọpụ na-arịwanye elu anaghị abịa na ngwa anya ebe ọ bụ na iji kaadị ebe nchekwa na mkpanaka USB, ojiji ha bụ naanị oge ụfọdụ akọwapụtara.
Uru nke laptọọpụ na-enweghị CD, DVD ma ọ bụ ihe na-agụ BluRay bụ ịdị arọ ya dị ala, obere ọkpụrụkpụ yana otu ihe na-adịchaghị agbaji. Naanị ihe ọghọm anyị nwere bụ na anyị enweghị ike itinye diski nke akwụkwọ ndị ahụ na ihe didactic, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ndị mbipụta na-ebugo ọdịnaya a na ịntanetị, yabụ ịnwe laptọọpụ nwere ngwa anya agaghị adị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ. .
Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma iji mụọ ...
Ọ bụrụ na ị ga-amụ injinia, ihe ịchọrọ bụ kọmpụta na-enye gị ohere ịme mmemme ederede ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka AutoCAD, Euler MathToolbox, Maxima ma ọ bụ SolidWorks, n'etiti ndị ọzọ. Enwere ike iji ụfọdụ ngwanrọ ndị a dị n'elu otu n'etiti etiti, dị ka ndị nwere a processor dakọrọ I5 isi nke Intel, 4GB nke RAM na diski ike nke ikike ọ bụla, mana ihe niile ga-adabere ma, na mgbakwunye na ọmụmụ ihe ọmụmụ, ị ga-ejikwa mmemme dịka SolidWorks ndị a kpọtụrụ aha.
Mgbe anyị na-emeso ihe ga-eme ịme anwansị ma ọ bụ mee ihe, ihe a tụrụ aro ga-abụ bulite ihe nrụpụta nke dabara na Intel's i7, 8GB nke RAM na, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, a. laptọọpụ na SSD disk nke ga-akpali data ngwa ngwa.
IT na mmemme
Ụmụ akwụkwọ sayensị kọmputa nwere ike iji kọmpụta ọ bụla ma ọ bụrụ na ha ga-amụ tiori na ide koodu. Nke ndị editọ ederede maka koodu Ha na-adịkarị mfe n'ihi na ha na-arụ ọrụ na ihe a maara dị ka "ederede doro anya", n'ihi ya, ọbụna ngwá ọrụ kachasị mma ga-aba uru. Mana ihe ọzọ ga-ekwesịrị iburu n'uche, ya bụ na, n'ihe niile nwere ike ime, anyị ga-egosipụta na ihe anyị mebere na-arụ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, e nwere ọtụtụ ndị mmepe na-ekwu banyere otú ọrụ ha dị tupu na mgbe ha na-akwaga n'òtù dị ike karị, ya mere ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa na ụmụ akwụkwọ mmemme ga-ajụ onwe ha, ma ọ bụ jụọ ndị nkụzi ha, olee ụdị. ọrụ ha ga-arụ. Ndị na-aga na-amụ koodu, nwere ike iji etiti etiti, ma ọ bụ ọbụna ala dị ala, ma ndị na-aga ime ihe ọzọ ga-achọ otu ihe dị ike karị, dị ka akwadoro ya na ihe nhazi ya na ya Intel Core i7 na 8 GB nke RAM. Ma ọ bụ ọbụna karịa, ọ bụrụ na ha ga-emepụta ngwa dị arọ.
Ndụmọdụ laptọọpụ anyị maka mmemme
Studentsmụ akwụkwọ na-ahụ maka ihe owuwu na ụmụ akwụkwọ injinia na-eji mmemme ndị yiri ya mgbe ụfọdụ, mana dị ka ụmụ akwụkwọ injinia nwere ike chọọ ihe kacha sie ike ma ọ bụ ghara iji ha, ụmụ akwụkwọ na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ na-eme. ha na-ejikarị ngwa ngwa na-achọsi ike arụ ọrụ.
N'ime ha anyị nwere ụdị AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Photoshop, Revit, InDesign, Sketchup na eleghị anya Rhino. N'iburu n'uche na ọtụtụ n'ime ngwanrọ ha nwere ike iji na-achọ nsụgharị nke emepụtara, a na-atụ aro ka iji kọmputa nwere Intel i7 processor ma ọ bụ ihe dakọtara, 8GB ma ọ bụ 16GB nke RAM na diski ike nwere opekempe otu akụkụ SSD.
Ọ bụrụ na ị ga-amụ na igwu egwu
N'etiti ịmụ ihe na igwu egwu, enweghị mgbagha anyị ga-ele anya na nke kacha ọhụrụ. Na-egosighị ụdị ọmụmụ ihe anyị ga-eme, anyị ga-eche na anyị chọrọ naanị mmemme ederede, ihe nchọgharị na ngwanrọ ụlọ ọrụ n'ozuzu. Ọbụlagodi na ọrụ anyị chọrọ sọftụwia dị arọ n'aka anyị, ọ gaghị adị arọ dị ka aha egwuregwu kacha mma. Ya mere, ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo otu anyị ga-eso gwuo egwu, anyị ga-enwe otu anyị ga-eji mụọ ihe.
Kọwaa nke a n'elu, ka shuga na-abawanye, na-atọ ụtọ. Ee e nwere ihe yiri nke doro anya: ọ dịghị onye ga-atụ aro ka ị kpọọ kọmputa nwere processor nke dị n'okpuru Intel i7, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD nke nwere ihe dịka 512GB nchekwa, n'agbanyeghị na nke ikpeazụ ga-adabere na ọnụọgụ egwuregwu anyị chọrọ inwe.
Onye ọ bụla nwere ike imeli ya kwesịrị ịchọ ihe kwekọrọ na a i9 laptọọpụ Intel, 16GB ma ọ bụ 32GB nke RAM, draịvụ ike 1TB na SSD, nke anyị ga-etinyerịrị kaadị eserese dị mma, dị ka NVIDIA ma ọ bụ Radeon kachasị ike.
Oh, na ihe ọzọ: keyboard ga-adị njikere iguzogide mmesi ike nke anyị ga-enye igodo mgbe anyị na-egwu egwu. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ ga-adịkwa ọkụ azụ ma nye ụkpụrụ agba. N'ikpeazụ, anyị enweghị ike idozi maka ihuenyo dị ala, yana opekata mpe, anyị kwesịrị ịhọrọ nke nwere ihuenyo FullHD.
Lelee aro anyị maka laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala
N'ozuzu, ụmụ akwụkwọ ahụike adịghị mkpa akụrụngwa dị ike. Ọtụtụ ngwa ngwa ha ga-eji ga-adị ka ụlọ ọrụ ma ọ bụ agụ ihe. Ihe ndị dọkịta na-ejikarị eme ihe bụ Vademecum, nke bụ isi okwu "akwụkwọ ọkọwa okwu ọgwụ."
Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-amụ ọgwụ na ị nweghị ike imeli ihe nwere ọnụ ahịa dị elu, ị ga-ama na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa ọ bụla bara uru. Mana n'onwe m ga-amasị m ịkwado nkọwapụta: Ihuenyo ga-enwerịrị mkpebi dị mma, maka oge ndị ahụ anyị kwesịrị ịhụ ihe oyiyi nke ahụ mmadụ na àgwà ọma.
Ma, ebe ọ bụ na anyị chọrọ ịmụ akwụkwọ ka ọ bụrụ dọkịta, ọ bụrụ na anyị achọghị ịga otu n'ihi na anyị na-enwe nchekasị ngwa ngwa, ọ bụrụ na anyị nwere ike, anyị ga-aga maka kọmputa nwere ihe nhazi nke kwekọrọ na Intel i5.
Iwu bụ ọrụ n'ime akwụkwọ ozi, n'ihi ya, kọmputa anyị ga-achọ ịmụ ya bụ nke na-enye anyị ohere ịgụ na ide ha n'ụzọ kacha mma. N'ụzọ bụ isi, anyị ga-achọ kọmpụta ọ bụla nwere ike ibugharị ngwanrọ ụlọ ọrụ, dị ka Microsoft Okwu na Excel. Ma agaghị m achọ ịhapụ ya dị ka nke ahụ na-enweghị ịdọ aka ná ntị, ọzọ, na ihe a na-atụ aro ime ka ị ghara ịta ahụhụ site na ngwa ngwa nhazi ngwa ngwa, karịsịa mgbe imeghe ngwa, bụ ịzụta kọmputa nwere i5 processor ma ọ bụ ihe kwekọrọ. Banyere RAM na diski ike, onye ọ bụla nwere ma ọ dịkarịa ala 4GB RAM na diski buru ibu iji chekwaa akwụkwọ kwesịrị ya, nke na-adịghị achọ nnukwu ihe.
Ụmụ akwụkwọ chepụta eserese ha enweghị ike idozi maka naanị kọmputa ọ bụla. Ha na-aga ịkwaga obere sọftụwia dị arọ, dị ka Photoshop (ma anaghị m ekwu na ọ bụghị), kamakwa nke ka arọ nke anyị ga-eji emepụta ihe ma rụọ ọrụ.
Maka ọrụ ahụ n'onwe ya, anyị ga-achọrịrị ike, ma nke a ga-adịkwa mkpa n'oge nsụgharị ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na onye ọ bụla nwere ike ime ya, ọsọ ahụ ga-adịkwu ike karị. Ya mere, nwa akwụkwọ na-ese foto kwesịrị ịga maka kọmpụta nwere ihe nrụpụta Intel i7 ma ọ bụ ihe dakọtara, 8GB ma ọ bụ 16GB nke RAM na, dị mma, draịvụ ike SSD.
Banyere nha nke nchekwa ahụ, ọ ga-adabere na ọrụ ndị echekwara, mana ọ bara uru ịnọ gburugburu ma ọ bụ gafere 512GB.
Lelee ndụmọdụ laptọọpụ anyị maka imewe eserese
Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ iji mụọ
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-ekpebi ịzụta mbadamba nkume ma ọ bụ iPad iji dochie laptọọpụ na ekele maka obere ya na ihuenyo mmetụ na-enye gị ohere idetu ihe.
N'uche nke m, M ga-nzọ nzọ na mbadamba nkume ma ọ bụrụ na ojiji anyị ga-eme nke ngwaọrụ bụ nnọọ sporadic ma ọ bụ n'oge. Ịde ndetu na ihuenyo mmetụ adịghị mfe (karịsịa ma ọ bụrụ na mbadamba nkume adịghị elu) na nsonaazụ anyị nwetara dị ntakịrị ma ọ bụ na-ewe ogologo oge karịa ma ọ bụrụ na anyị eme ya na mpempe akwụkwọ na pen.
N'ọkwa ngwa anyị ga-enwe oke. Na mbadamba ihe enwere ngwa maka ihe niile mana ọ bụrụ na anyị chọrọ iji Okwu ma ọ bụ editọ ederede ọ bụla, enweghị ahụigodo anụ ahụ ga-amachi ikike ọrụ anyị nke ukwuu. Ee, ị nwere ike jikọọ ahụigodo mpụga site na bluetooth mana ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ị gbakwunye ọnụ ahịa mbadamba ihe dị elu yana nke ahụ keyboard, nsonaazụ ga-adị elu karịa ma ị zụtara laptọọpụ ụmụ akwụkwọ ozugbo.
A na-adọrọ mmasị ngwọta nke bụ ọkara n'etiti a laptọọpụ na a mbadamba bụ 2 n'ime 1 laptọọpụ nke bụ ihe ọ bụla karịrị a touchscreen laptọọpụ inwe ike iji ya dị ka mbadamba nkume mgbe anyị chọrọ ya.
Iji mụọ akwụkwọ, ọ ka mma desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ?
Ọtụtụ oge ajụjụ na-ebilite ma laptọọpụ ma ọ bụ kọmpụta desktọpụ ka mma maka ịmụ ihe. Nke a na-eme n'ihi na ihe laptọọpụ na-eri anyị, anyị nwere ike nweta kọmputa desktọọpụ n'ozuzu ike karịa.
N'ebe a, ihe ị ga-enyocha bụ obere ihe ịchọrọ maka ọmụmụ ihe gị. Ọ bụrụ na PC ga-eso gị gaa ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum, ọ dị ka o doro anya na laptọọpụ bụ ihe ị na-achọ maka ọmụmụ ihe gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na desktọpụ ahụ na-eme ka ị rụọ ọrụ maka ọrụ klaasị ma ọ dịghị mkpa ka etinye ihe niile n'ihe dị arọ na-erughị 3 Kilo, Desktọpụ bụ nhọrọ ezi uche dị na ya ebe ọ ga-adị ọnụ ala ma ị ga-enwekwa ike karịa, ya mere ọ ga-adịru gị ogologo oge. Ọbụna mgbe a bịara n'ịkwalite, ọ dị mfe ime ya na PC nkịtị karịa na laptọọpụ.
Nkwalite laptọọpụ ụmụ akwụkwọ
Ịbụ nwa akwụkwọ nwekwara uru ya mgbe ịzụrụ kọmputa. Ọtụtụ ụdị na ndị na-emepụta ihe na-enye ego na onyinye pụrụ iche na mpaghara a iji kwalite mmụta na kọmputa aghọwo ihe nkwado dị mkpa maka ọmụmụ ihe.
Ọ dị mkpa ka ị nyochaa ihe ndị a na-enye nke ọma ebe ọ bụ na ọ bụrụ na Apple nwere ọnụ ahịa a kapịrị ọnụ na ụlọ ọrụ niile, na ụdị ndị ọzọ ọ ka nwere ike ịbụ na mbelata maka ụmụ akwụkwọ, laptọọpụ ga-adị ọnụ ahịa karịa ọnụ ahịa karịa. ma ọ bụrụ na ọ bụ ịzụrụ site n'otu n'ime onyinye anyị.
Mgbe ahụ, anyị na-ahapụ gị ihe ndị a na-enye na kọmputa maka mahadum ma ọ bụ kọleji.
Apple na mac
Apple na-enwekarị ihe mkpali ha na-amụ. N'otu aka, anyị nwere mbelata ihe ruru € 329 (na-abụkarị 12% na RRP) na Mac na iPad Pro niile na-adịru afọ niile. Naanị anyị ga-enweta ụlọ ahịa agụmakwụkwọ ka anyị nwee mmasị na ha.
Ọ bụrụ na anyị ewere ohere nke ọnwa okpomọkụ, anyị nwekwara ike ijide nkwado ha Back to School nke anyị na-agaghị enweta naanị a. nnukwu mbelata na ịzụrụ Mac ịmụ akwụkwọ mana ha ga-enye anyị ụfọdụ ngwaahịa ha ma ọ bụ kaadị onyinye maka ịzụrụ ngwa. Na 2018, dịka ọmụmaatụ, ha na-enye ụfọdụ Beat Solo3 bara uru na 300 euro. Ọ bụghị ihe ọjọọ, nri?
Hụ onyinye na laptọọpụ Apple yana echiche anyị
HP nwekwara nnukwu mbelata ihe ruru 30% maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi. Ihe dị mma gbasara ika a bụ na anyị nwere ụdịdị dị iche iche, site na kọmpụta dị oke ọkụ ruo na mgbanwe, egwuregwu na ihe ndị ọzọ.
Hụ onyinye na laptọọpụ HP yana echiche anyị
Lenovo na-agbakwụnye na mbelata na laptọọpụ maka ebumnuche agụmakwụkwọ ma tinye mbelata 10%.
Hụ azụmahịa na laptọọpụ Lenovo yana echiche anyị
Dell nwekwara mmemme nchekwa ụmụ akwụkwọ nke anyị nwere ike nweta mbelata 10% na XPS, Alienware, Dell Gaming laptops, Monitors na projectors. A na-ebelata mbelata ahụ na 5% ma ọ bụrụ na anyị zụta PC site na oke Inspiron.
N'ikpeazụ, anyị na-ahụ Toshiba nke na-ebelata ọnụ ahịa ngwaọrụ ya site na 5%, nke na-adịghị eme ka ọ mara mma dị ka ụdị ndị ọzọ nke anyị hụrụ na ego maka agụmakwụkwọ.
Iji nweta uru nke ego ndị a niile na laptọọpụ ụmụ akwụkwọ, ọ ga-adị mkpa ka anyị gosipụta na anyị debanyere aha na otu n'ime mahadum ndị dị na mpaghara ebe nkwalite na-arụ ọrụ.
Ngwa iji kọmpụta were ndetu
Ọ bụrụ na ị mechara kpebie iji kọmputa maka kọleji ma ọ bụ mahadum, anyị na-ahapụ gị ndepụta nke ngwa kachasị mma iji dee ndetu na ịrụ ọrụ dị iche iche.
A ga-etinyerịrị ụlọ ọrụ Microsoft na kọmpụta niile raara nye mmụta. Na ya anyị ga-enwe ngwa dị ka Okwu, Excel ma ọ bụ PowerPoint nke ga-enye anyị ohere dezie akwụkwọ, spreadsheets na ngosi n'otu n'otu.
Gịnị mere anyị ji akwado Office? Ihu ọma n'ihi na bụ nke onye ọ bụla na-eji Na nke ahụ ga-ezere gị inwe format incompatibilities site na iji ndị ọzọ ụlọ ọrụ suites dị ka iWork bụ naanị dakọtara na Mac (n'agbanyeghị, Office nwere ike iji na Apple kọmputa na-enweghị nsogbu).
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ 100% na igwe ojii, Google nwere ọrụ dịka Google Docs, Google Sheets na ọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ dị anyị n'efu. Ihe dị mma banyere ihe Google na-enye anyị bụ na ha bụ akwụkwọ nkwekọrịta, ya bụ, ọtụtụ ndị nwere ike gbanwee ha n'otu oge na mgbanwe ndị ahụ nwere ike ịhụ ozugbo site n'aka ndị niile nọ n'ime ya.
Dropbox bụ ọrụ nchekwa igwe ojii na-ewu ewu nke ị nwekwara ike ịnweta site na mkpanaka gị, mbadamba nkume, wdg. N'ebe ahụ ị nwere ike ịchekwa ọrụ gị niile, akwụkwọ na ndetu ejiri na laptọọpụ wee si otú a na-enwe ha mgbe niile.
Dị ka ndị ọzọ na Dropbox, ị nwere Google Drive, OneDrive ma ọ bụ iCloud. Ha niile nwere atụmatụ efu nke na-abụkarị karịa ezuru ụmụ akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị ga-edetu ọtụtụ oge iji dee ihe ị ga-eme, Evernote bụ ngwa dị mkpa maka gị. Ọ dị maka kọmpụta na ngwaọrụ mkpanaaka ka ị ga na-emekọrịta nkọwa gị niile na nke ọhụrụ n'etiti ngwaọrụ.
Wolframalpha bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị nwere ngwa mkpanaaka nke ga-enye gị ohere idozi nha nha n'ụdị niile (mkpụrụ, usoro, akara nha, algebra, ọnụ ọgụgụ, wdg) ma ọ bụ ọbụna see eserese.
Ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ, chekwaa ibe a na ọkacha mmasị gị n'ihi na ị ga-agakarị ya ma ọ bụrụ na ị na-akwado injinia ma ọ bụ na ị ga-aga ngalaba sayensị.
Ọ bụrụ na ị ga-eme ụfọdụ ọrụ otu ma ọ bụ chọọ ibuga nzukọ gị oke, Trello bụ ngwa zuru oke maka gị. Ị ga-enwe ike ịhazi ọrụ niile site na bọọdụ wee guzobe usoro dị iche iche maka nke ọ bụla n'ime ha, yabụ ị ga-ama mgbe niile ọnọdụ ha nọ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ
4 Comments na "Laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ"
Ọktoba 2017-06 na elekere 09:11 nke abalị
Nnọọ! Kedu ka ọ si aga? Akụkọ mara mma! Ị hụrụ, ọ ga-amasị m ka ị kwado m laptọọpụ na-enwe mmefu ego nke 300 euro, amaara m na ọ bụ obere ego mana kpọmkwem n'ihi nke a, achọrọ m inweta ihe kachasị mma na ya hahaha. Ojiji nke kọmputa ga-abụ ihe bụ isi, isi ihe ga-abụ nchekwa na batrị, echere m na ọ bụ ihe onye ọ bụla na-achọ. Agbanyeghị, ekele na ekele n'ihu!
Daalụ Reina! Ị hụrụ, maka mmefu ego ị nwere ma ọ bụrụhaala na ị na-eji ya eme ihe, ị gaghị enwe nsogbu. Ihe m ga-akwado bụ ka ị lelee ndị m jikọtara n'isiokwu a ebe ọ bụ na ha kacha mma maka ụmụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-eme ka ị kwenye, m ga-elelekwa ụlọ nke blọgụ ebe m depụtara ọnụ ahịa ole na ole ị na-agwa m. Ị gwa m, ekele! 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:6 nke abalị
Maka nwata nwoke dị afọ 10 ka ọ rụọ ọrụ klas, chọgharịa wee chọọ ozi na ịntanetị yana (echere m) na ọ ga-ejikwa ya gwuo ihe ...
kedu nke i chere bụ ezigbo nhọrọ?
Enweghị m nnukwu ego, ọtụtụ ndị na-abịa ebe a bụ maka ụmụ akwụkwọ mahadum, echere m na, ka nke a na-aga n'ihu, mgbe ha nọ na mahadum, ha ga-azụta nke ha nwere ike iji nke ọhụrụ. mmemme.
Kedu ihe ị ga-akwado m?
Ọktoba 2017-06 na elekere 13:3 nke abalị
N'ehihie ọma Cristina, echere m na i kwuru eziokwu. Ọ bụ ezie na ndị a ebe a nwere ike ịbụ karịa maka ụmụ akwụkwọ meworo agadi, ha ka bụ ụmụ akwụkwọ. Ị nwere ike ile anya na-enye ebe ọ bụ na ụfọdụ ụdị nwere ọnụ ala dị ala na n'ikpeazụ ojiji ga-abụ ihe ma ọ bụ obere. Dee, chọta ozi na egwuregwu. Ihe niile dị n'isiokwu a bụ ihe m na-akwado 😀 Ọ bụrụ na ịchọrọ ileba ọnụ ahịa anya karịa iji, enwere m ike ịkwado ibe ụlọ anyị ebe anyị mere obere nchịkọta nke ohere ịzụ ahịa dị mma. Ekele!